नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला नेतृ बनिन्‌ रामकुमारी झाँक्री
Nepali Radio / F.M. / TV उनलाई हराउन एमालेका माधव नेपाल पक्षधरहरु र जिताउन महासचिव झलनाथ खनाल र उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम नेताहरु
काठमाडौँ, September 27, 2008- नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनहरुमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने एमाले भातृ सङ्गठन अनेरास्ववियूको अध्यक्ष पदमा आफूलाई चुनाव हराउन गरिएको कैयौं हत्कण्डाका बाबजुद रामकुमारी झाँक्री मगर निर्वाचित भएकी छिन् । यसअघि कुनैपनि पार्टीको इतिहासमा महिला संगठन बाहेक अन्य भातृ संगठनको अध्यक्ष महिला बनेका छैनन् ।
प्रतिद्धन्दी गोकुल घर्ति मगरलाई सात सयभन्दा बढि मतले पराजित गरेकी झाँक्रीले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो महिला विद्यार्थी अध्यक्ष हुने सौभाग्य पाएकी छन् ।
झाँक्रीलाई अध्यक्षमा हराउन विधान विपरित सम्मेलनमा सात सय बढि प्रतिनिधि ल्याइएपनि उनले सात सयभन्दा बढि मतले नै घर्तिलाई पराजित गरिन् । झाँक्रीले कूल सदर मतमध्ये १ हजार ३ सय ८ मत प्राप्त गरेकी छन् भने उनका प्रतिद्धन्दी गोकूल घर्तिले ७ सय ८१ मतमात्र प्राप्त गरे । चुनावमा झाँक्री र घर्ति पक्षका आ-आफ्नै प्यानल खडा भएका थिए । कुल निर्वाचन परिणाम भने मिश्रित आएको छ।
झाँक्रीलाई अनेरास्ववियूको अध्यक्ष बन्न नदिने षडयन्त्रपनि अन्तिम समयसम्मै जारी रह्यो । उनले विजय हासिल गरिसकेपछिपनि निर्वाचन नतिजा सुनाउन ढिलाई गरिएको थियो । झाँक्रीलाई हराउन एमालेका पूर्व महासचिव माधव नेपाल पक्षधरहरु लागेका थिए । झाँक्रीको पक्षमा वर्तमान महासचिव झलनाथ खनाल र उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम लगायतका नेताहरु थिए ।
अध्यक्षमा निकै ठूलो मतान्तरले झाँक्रीले विजय हासिल गरेपनि उपाध्यक्ष, महासचिव र एक सचिवको पदमा घर्ति पक्षीय उम्मेदवारहरुले जितेका छन् । झाँक्री प्यानलका पुरुषोत्तम आचार्यलाई हराउँदै घर्ति प्यानलका सोभियत ढकाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् भने घर्ति प्यानलकै माधव ढुङ्गेलले झाँक्री प्यानलका उपेन्द्र पौडेललाई महासचिवमा पराजित गरेका छन् ।
दुई सचिवमध्ये मधेश सचिव पदमा झाँक्री पक्षका सुधिर शाह निर्वाचित भएका छन् । उनले घर्ति प्यानलका दिनेश यादवलाई पराजित गरेका थिए । अर्का सचिव पदमा भने घर्ति प्यानलका किशोरबिक्रम मल्लले झाँक्री प्यानलका रुपेश खतिवडालाई पराजित गरे । कोषाध्यक्ष पदमा भने झाँक्री प्यानलकै नरबहादुर धामी विजयी भएका छन् ।
Student leader Ramkumari Jhakri Magar at the USNepalOnline's Nepal office Pulchok, Lalitpur, Kathmandu, Nepal in 2007. Photo: eEyeCam
अनेरास्ववियूको २१ सदस्यीय सचिवालको निर्वाचन परिणामपनि मिश्रित आएको छ । झाँक्री पक्षका चुडाराज ढकाल, नविना लामा, सावित्री थापा र अशोक यादव विजयी भएका छन् भने घर्ति पक्षका सुरेन्द्र गुरुङ्ग, पदम गिरी, रमेश आचार्य, रचना खड्का, नवराज पौडेललगायत विजयी भएका छन् । घर्ति पक्षले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सात सय बढि प्रतिनिधि ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
Ramkumari Jhakri with Jhalanath Khanal, General Secretary of CPN (UML) and other student leaders during the rally of the 19th National Convention of All Nepal National Free Students’ Union (ANNFSU) held in Pokhara from September 20 to 26. Photo: Smita
Ramkumari Jhakri in ethnic Magar dress. Photo: Smita
Photo courtesy: Ms Jhakri
» Education, Health and Employment Are Nepalese Students’ Basic Right (9 Photos)
» With 2,000 Student Representatives and Guests from 40 countries
Pokhara Goes with Red for One of the Largest Student Unions’ Convention
» Parijat and Her Legacy Bearers
» The Sari Soldiers: Six Nepalese Women with Different Ideologies Find Common Ground Through Film
नेपाली सारी सैनिकहरुको सागा